दशैंमा आशीर्वादको खात र त्यसको धरातल ! – Sthaniya Patra
रूपचन्द्र अधिकारी असोज २१, २०७६
एउटा व्यक्ति परिवारभन्दा अलग रहन सक्दैन, परिवार समाजभित्र रहन्छ र समाज राष्ट्रको एक अंगको रूपमा चरितार्थ प्रकट भइरहेको हुन्छ । अन्ततः राष्ट्रका जनताको भविष्य र सम्भावना राज्य सञ्चालनको व्यवस्थासँग जोडिन्छ । तर आज दुर्योधनको दीर्घायुसँग आशीर्वाद साटिरहँदा अकालमा मृृत्यु अनावरण गर्नेहरूको संख्या दैनिक दाहोरो संख्यामा बढिरहेको छ । कारणका रूपमा जुनै हिसाबले पनि राज्य र यसका अंगहरू जोेडिएका छन् । चाहे ती नीतिनिर्माणका सिलसिलामा भएका कमजोरी हुन् वा कार्यान्वयनका पक्षहरूमा भएका लापरवाही नै किन नहुन् ? आआफ्नो धर्म र परम्परालाई अन्य कुरा मान्ने हो भने के राज्यसत्ता सञ्चालनका मतियारहरूमध्ये कोही पनि हिन्दू थिएनन् त ? के उनीहरूले युधिष्ठिर जस्तो सत्यवादिता र विदुर जस्तो ज्ञानी हुनु भन्ने आशीर्वाद आर्जन गरेका थिएनन् त ? नत्र नेपाल किन विश्वको आधुनिकतासँग पराजित भइरहेको छ ? यसर्थ आशीर्वादको रूपमा खास समयमा प्राप्त गरिने यस प्रकारका मेहनती कर्णप्रिय शब्दप्रवाहहरू अब सधैं आशीर्वादमा मात्र सीमित नहून् । व्यावहारिकतासँग कम्तीमा जोडिनसम्म सफल रहून । राष्ट्रमा सुख, शान्ति र समृद्धिको ढोका खुलोस् ! बडादशैंको सबैलाई शुभकामना ! lokantar.com
नवलपरासीमा १ लाख बढिको अबैध समान सशस्त्र प्रहरीको…
एमाले पालिका अधिवेशन : असफल बन्दै रुपन्देहीका ४ पालिकामा…